dareemayaal: Ogow dhammaan heerkulka kumbuyuutarkaaga. Laga soo bilaabo Linux
dareemayaal: Ogow dhammaan heerkulka kombuyuutarkaaga
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Lagu taliyay
Waxaan haystaa laptop, maaha mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn (14-inch oo kaliya oo la soo bandhigo) laakiin wuxuu leeyahay processor aan laga fiirsan karin (Core2Duo T7400). Dhibaatada laptops, ama ugu yaraan mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn waa heerkulka.
Sida iska cad, PC ama Desktop ayaa hawo fiican leh marka loo eego laptop-ka, maaddaama oo ay leedahay meel badan oo gudaha ah oo hawadu ku wareegi karto, waxay leedahay hawo badan, iwm Maaddaama tani ay tahay laptop-ka keliya ee aan haysto (mana jirto wax suurtagal ah oo lagu helo haha ​​kale), waan daryeelaa inta aan kari karo oo marwalba waan ka warqabaa heerkulka processor-ka.
Si aad u ogaato heerkulka mecee kasta ee processor-ku leeyahay (waa 2 koronto maxaa yeelay waa Core2Duo), waa kuwan tallaabooyinka:
1. Ku rakib xirmada lm-dareemayaal
2. Ku orod terminal: dareemayaal
Tani waa ku filan 😀
Xaaladdayda, waxaan rakibey xirmada (lm-dareemayaal) iyo terminal aan ku ordo dareemayaal. Waa kan shaashadda:
Sida aad ku arki karto shaashadda, heerkulka aan doonayo inaan ogaado (tii CPU-ga, xudun kasta oo isku mid ah) Waa 51 ° C mid kasta
Sida caadiga ah waxay muujineysaa heerkulka darajo Celsius ah, haddii aad rabto inaad ku muujiso iyaga Fahrenheit isticmaal cabirka -f. Taasi waa: dareemayaal -f
Hagaag, wax intaa ka badan oo lagu daro 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » dareemayaal: Ogow dhammaan heerkulka kombuyuutarkaaga
Terminalku wuxuu ku tusi karaa heerkulka waqtiga dhabta ah adoo gelinaya:
daawo -Samiin 01
ilbidhiqsi kasta wuxuu muujinayaa sida heer kulku isu beddelayo
hadda waxaan jeclaan lahaa inaan isticmaalo amarkan oo aan ku sameeyo qoraal xasaasiyad leh si xogta loo soo bandhigo qaab muuqaal ah oo aan ku jirin terminaalka.
Waan ka helay amarka daawato, Ma aanan aqoon isaga 😀
Ma aqaano sababta aysan u qaadanaynin amarka Watch, waxaad u beddeli kartaa YAD Zeniy waana inay kuu shaqeysaa:
T = $ (dareemayaal)
yad –notification –back = RED –text "$ T"
Maya maya aniga ima aysan shaqeyn aniga laakiin mahadsanidiin.
Hagaag waan tijaabinayaa, heerkulka ugu dambeeya + 6652.0ºC ayaa dareenkeyga qabanaya, maadaama heerkulka sare uu yahay 100ºC heerkulka halista ahna uu yahay 110ºC, kani waa aqriska uu i siinayo:
Adapter: adabtarada PCI
temp1: + 6652.0 ° C (sare = + 100.0 ° C, crit = + 110.0 ° C)
Haddii uu PCI lahaa heerkulkaas mar hore ayuu ku qarxi lahaa wejigaaga, runtu weligay iguma dhicin aniga oo garan maayo sida loo xalliyo.
Nah tani waa in dareeraha adiga nVidia aan si wanaagsan loo qorsheynin, ama kantaroolaha tan nVidia-kaaga uusan si fiican u aqrin heerkulka, ama wax la mid ah haha.
taas ayaa sharraxaysa waligay ma isticmaalin nvidia XD
Waa wax aad u wanaagsan, sidoo kale, sahlanaanta, waxaad ku dari kartaa adoo adeegsanaya amarka fulinta adoo isticmaalaya xaydha conky.
Waa inaad isku daydaa !! 🙂
Maalmo ka hor waxaan isticmaalaa codsigan, waxaa kale oo jira Jihooyin horay loo yiqiin sida:
xfce4-sensors-plugin, ksensors, sensors-applet for gnome, xsensors jawiyo kale, sidoo kale conky….
Sida muuqata lint mint ayaa leh isku dhafan.
Waxaan helayaa waxyaabaha soo socda:
Wax dareemayaal ah lama helin!
Hubso inaad buuxisay dhammaan darawallada kernel ee aad u baahan tahay.
Isku day dareemayaal-soo-saar si aad u ogaato kuwan yihiin.
Orod sida xididka
oo ka jawaab waxa uu ku weydiisto, si ay u bilaabato, kaliya haa sii su'aasha ah haddii aad rabto inaad ku shubto bilowga
Sida ay ku yiraahdeen http://kubuntuneado.blogspot.com.es/2008/01/verificar-temperaturas-con-lm-sensors.html :
Dib ugu celi nidaamka, maadaama ay yihiin dareemayaal akhriya firida.
KZKG ^ Gaara Waxaan hayaa T7200 (waxoogaa ka xun T7400-kaaga) sidoo kale waan daryeelaa maxaa yeelay lacag ma lahan mid kale waqtigaan
Waxa ugu walwalka badan aniga ayaa ah heerkulka diskiga adag maxaa yeelay 10 daqiiqo ka dib markii aad shidato laptop-ka horeyba waa ay u dhaaftay 49-50ºC oo xoogaa sare ugu jira diskiga adag.
Taasi waa sababta aysan u dhaawaceynin in dareeraha heerkulka ee darawallada adag sidoo kale la rakibo
aptitude rakibi hddtemp
hddtemp / dev / sda (ama waxkastoo)
Kaliya waxaan hubiyey heerkulka HDD, wuuna dhaafay 40 °. Heerkulkaas aad sheegeyso waxaan u maleynayaa inuu xoogaa sarreeyo, illaa aad sameynayso wax culeys badan ku qaadaya laptop-ka, waxaan u maleynayaa inuu xoogaa ka kulul yahay sidii la rabay.
Mahadsanid, taasi waxay xaqiijinaysaa in dhibaatadu tayda leedahay oo aysan ahayn naqshadaynta buuggaagta.
Waan furi doonaa si aan u nadiifiyo oo aan u fiirsado inkasta oo aan ka shakisanahay in labadii sano ee ay ku jirtay toogashada serverka ftp ay dhibaato weyn ka soo gaadhay darawalka adag
Haddii aadan waligaa furin, waxaad runtii dareemi doontaa horumar MUUQAAL ah markaad nadiifinayso. Hadda, laptop-yada waa saaxiib jilicsan ... aad u taxaddar marka aad furayso 😉
Weligay tan maan fahmin. Laptop-kayga heer kulkiisu waqti gaaban wuxuu had iyo jeer ka sareeyaa 100 ° C.
temp1: + 115.0 ° C (sare = + 100.0 ° C, crit = + 110.0 ° C)
Ma aqaano inay caadi noqon doonto, ama haddii uusan si fiican iila shaqeynayn.
Goorma ayey ahayd markii ugu dambeysay ee aad furto laptop-kaaga oo aad nadiifiso qalabka kuleylka lagu xiro?
Waxaan kugula talinayaa inaad hesho qof wax ka yaqaan laptops-ka, kala qaad oo nadiifi (khaasatan qiiqa CPU).
Heerkulkaasi waa mid xad dhaaf ah, waxa layaabka leh ayaa ah in uusan dib u bilaabin kaliya si looga hortago gubashada.
Fur si aad u nadiifiso oo aad u saxdo Haddii aadan sii wadi karin
KZKG ^ Gaara iyo Oberost, waad ku mahadsantahay taladaada.
Xaqiiqdii waligay kamaan nadiifin muddo 6 sano ah! Waan kala qaadayaa oo nadiifinayaa, haddaan maalmahaas midkoodna igu gubin.
Daminta ayaa igu dhacday kaliya aniga oo hal qeybinaya, kuwa kalena taageere ayaa u eg waali.
Waad soo dhawaynaysaa saaxiib, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino 🙂
Waxaan u maleynayaa inay sabab u tahay Noveau, ma kicinayso keydinta tamarta ee [b] [i] some [/ b] [/ i] nVidia.
Hagaag, waan fiicanahay, udub-dhexaadyadu badanaa (sida tan) qiyaastii 60 °, oo ah 80 ° sare iyo 100 ° muhiim ah.
Haduu yahay laptop wax dhib ah haba yaraatee ma jiro, ugu yaraan tayda ayaa lagu hayaa (shaqaynta iyo ka shaqaynta) in ka badan 80 °.
Hadda, haddii ay tahay PC (desktop) ... waa inaad si fiican u hubisaa, dheji kuleylka ku dheji processor-ka, nadiifiya kombiyuutarka, iwm.
Hagaag, waa Desktop, laakiin isticmaalka badan ee CPU-ga (GTalk Plugin) wuxuu gaarayaa 65-70, taas oo hadaan u maleeyo inay khatar tahay ... oo hadda kaliya daalacashada kama badna 60 ° ...
Taasi waa heerkulka uu laptop-kayga haysto ka hor intaanan nadiifin dhawr maalmood ka hor, sababtoo ah inuu daaran yahay wuxuu horeba uga sarreeyay 60 °, ka dib nadiifinta ka dib heerkulku hoos ayuu u dhacay 15 °.
Heerkulka GPU-yada (nVidia / Ati / Intel) ma muujiyo iyaga?
NVidia uma maleynayo inay tusayso iyaga, taasna waa inaan u isticmaalnaa barnaamijka nVidia barnaamijka Linux waxaan u maleynayaa.
karti u rakibida nvidia-goobaha
Mar alla markii aad rakibto waxaad ka furaysaa menu-ka ama qunsulka iyo tabka kuleylka kuleylka waxaad heleysaa heerkulka
Gnome 2 haddii aad rakibto dareemayaasha-tufaax waxaad fursad u leedahay in liiska dareemayaasha aad ka hesho midka GPU-ga oo leh astaantiisa iyo heerkulkiisa.
XFCE ma awoodin inaan wax ka helo si guddi ii tuso heerkulka GPU
Sideed u baddelaysaa midabka nooca qoraalka ee Konsole?
Xaqiiqdii waxba kuma aha Konsole, laakiin talobixinno aan galiyay my .bashrc ... Qoraal ayaan ka sameyn doonaa tan.
Waxaan hayaa HP oo leh Intel T9400 dual core 2.53 Ghz, 4 wan iyo muuqaal video ah, maxaa yeelay marwalba waxaan dhibaato ku qabay arinta heer kulka Linux, maadaama Windows uusan ka badneyn 32 °, laakiin markii ugu horeysay ee aan isku dayay si loo rakibo Linux oo loo kiciyo heerkulka ilaa 50 ° iyadoo la isticmaalayo Ubuntu 14.04, maxaa yeelay sida duufaanku iigu muuqdo xad-dhaaf aniga, waxaan bilaabay inaan raadiyo xulashooyin kale, sidaan oo kale waa xubinta 14.04 32-bit, Lubuntu 14.04 32-bit, iyo ugu dambeyn aniga Waxaan isticmaalayaa Linux Mint 17, maadaama heer kulka uu sii jiro inta u dhexeysa 35 ° iyo 38 °, waxaan u maleynayaa in heer kulku fiican yahay. Mise waan qaldanahay?
Aad baad u mahadsantahay saaxiib. Ku shaqeynta Ubuntu 14.04.3LTS amd64.
Jawaab Hoover Campoverde
Hadda waxaad ku iibsan kartaa muusikada Xayawaanka Humble.